Tag: mindmap | Martech Zone
Sabtida, Maarso 30, 2013 Sabtida, Maarso 30, 2013 Douglas Karr
Waxaan dhowaan u qornay nooca khadka tooska ah ee 'Mindjet', macmiilkayaga iyo kafaala-qaadaha tikniyoolajiyadda ee 'Martech'. Waxay leeyihiin 25% off khaas ah oo soconaya dhamaadka usbuuca! Aad ayaan ugu cusbahay fikirka waxaanan la kulmay fikrad maskaxeed cajiib ah oo lagu wadaagay Khariidadaha taas oo muujinaysa mabaadi'da 'Mindmapping'. Waxa aan ugu mahadnaqo maskax-dejinta ayaa ah inaan si dhakhso leh u abaabuli karo fikirradayda qaab jaranjaro ah illaa heer faahfaahsan oo xadidan.
Isgaarsiinta iyo Muuqaalka
Arbacada, Agoosto 22, 2012 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Waxaan u adeegsanaa GotoMeinging maalin kasta oo shaqada ah si aan ula hadalno macaamiisheenna. Wanaagsan run ahaantii aragtida mid ka mid ah macaamiisheena iyo kafaala qaadayaasha, Mindjet, oo matalaya fiidiyowga 'GotoMeeting'! Fiidiyowgu wuxuu lahadlayaa isku xirnaanta. Haddii aad qorsheyneyso khariidad maskaxeed ama dib-u-eegid qorshe mashruuc… aragga waa fure. Khariidadaha maskaxda waxay sawiraan fikradaha, hababka iyo isku xirnaanta si ay u fududaato in la fahmo. Gotomeeting, dabcan, waxay lamid tahay awooda hadda